Babadağ Cable Car ga-akwado ndị mmadụ 1 nde kwa afọ
Egwuregwu ntụrụndụ na ntụrụndụ Babada district nke dị na Fethiye district nke Mu thela, bụ ọnụ ụzọ achịcha nke njem njem mpaghara. Ọnụ ọgụgụ nke jumps paragliding na ọkara mbụ nke afọ mụbara site na 18 pasent karịa afọ gara aga. Fethiye ‘window ka uwa’ hụrụ dị ka [More ...]
Ọrụ na UYEM na-aga n'ihu
Mweghachi ahụ na-arụ ọrụ na ụlọ akụkọ Kirazlıyayla Sanatorium, bụ nke a ga-agbanwe ghọọ ụlọ ọrụ ọzụzụ na ebe obibi maka ụlọ ọrụ azụmahịa site na ụlọ ọrụ azụmahịa nke Ubuağ Life Long Education (UYEM) site na Bursa Chamber of Commerce and Industry, na-aga n'ihu n'ịgbagharị zuru ezu. BTSO Onye isi oche nke Board [More ...]
A na-ele Ankara si na Sky site na Cable Car
N'ime oge okpomọkụ, ndị chọrọ ịnụ ụtọ anya nnụnụ ahụ Keçiören na-agba ọsọ na ụgbọ ala. Turgut Altınok, Mayor nke Keçiören Municipality, kwuru, sị: sayesinde Dabere na ụgbọ ala ụgbọ ala, ụmụ amaala anyị nwere mmasị na mma nke Keçiören site na mbara igwe. [More ...]
Gụnyere Ultra Marathon amalite
Uludağ Ultra Marathon, nke obodo Bursa Metropolitan guzobere na ndị 1000 na-eme egwuregwu, nyere Mayor Alinur Aktaş. Mayor Alinur Aktaş, onye kwuru na nzukọ ụwa ga-enye onyinye dị mma n'ịkwalite Bursa, kwuru, sị :, Ndị asọmpi, njem nke obodo anyị [More ...]
Nhazi Nyocha 2 kwa ụbọchị na Yenimahalle Şentepe Cable Car Line
Sistem okporo ígwè Yenimahalle-Sentepe, ụlọ ọrụ 3 na 4'inci dị n'etiti arụ ọrụ na-aga n'ihu, ụnyaahụ, n'ihi ọrụ ọrụ nhazi nke ụbọchị abụọ ka emechibidoro. Site na ibipụta ọkwa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke General Directorate nke ONYE, [More ...]
Pamukkale Flights ga-adị mma
Pamukkale Flights ga-adị mma: Denizli Metropolitan Municipality, ọzọ onyinye na njem njem nke obodo na-edozi. Ebe obibi obodo obodo Denizli, Pamukkale hot air balloon flights, paragliding na ìhè ikuku ugbo ala [More ...]
Ọnwa ọ njem na Uludag
Ọnụ ọgụgụ amalitela maka ASTROFEST2019, otu n'ime ọrụ ụwa nke Bursa Science na Technology Center. N'afọ a, ASTROFEST 2019 ga-eweta ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama na ndị na-anụ ọkụ na mbara igwe na nzuko Uludağ. 19-20-21 ga-eme na Karinna Hotel dị na Uludag na July [More ...]
Ezi Ozi Site na Alanyaspor
Mayor Murat Yücel kwubiri arụmụka banyere nkwa nke X 12 lira na Alanyaspor maka ndị njem iri site na okporo ụzọ na-ebu puku mmadụ mmadụ kwa ụbọchị. X 1 afọ na district Alanya nke Antalya [More ...]
Ọ bụ na Alanya Municipality Council ka esitere na ọnụahịa nke ọnụahịa ndị na-akwụ ụgwọ, ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ, ọ bụrụ na agbanyeghị nkwekọrịta ochie ahụ, ọnụahịa ahụ ga-adị n'etiti 14,4-21,6 TL. N'aka nke ọzọ, ọkàiwu jurist "Anyị ga-agba akwụkwọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa" [More ...]
Ndị Kansụl na-ere Ahịa na Alanya Teleferik
Onye bu onye nzuko omeiwu CHP nke otu Erdogan Toktas, nke Alany Municipality 2019 nwere site na nzuko nke Mayor Yucel nyere n'onodu a, ikike ichota ugwo nke ugboala ugbua na Council nke Alanya mara ọkwa na Council nke New Ceren Sahin kwuru; [More ...]